Irshad CV (2) by irshad N 96 views
IJAZ CV by Ijaz Soomro 123 views
Azeem cv by mareeb 381 views
tek cv by zubair mohammed k... 114 views
resume mujeeb by MUJEEV AHMAD 93 views
Zeyad K.Alnajjar C.V by Zeyad Alnajjar 490 views
1. “ Aမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီး Aကောင်Aထည်ဖေါ်ရေး ကြေငြာချက် ” နေ့စွဲ - ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ (၃ဝ) ရက်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရေးAခြေAနေAားလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီး ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ Aထက်ဗမာပြည် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (၁၄-ဖွဲ့)၊ ပြည်ထောင်စုလူ့Aခွင့်Aရေးကောင်စီ AပါAဝင်ပြည်တွင်း ပြည်ပတိုင်းရင်းသား Aဖွဲ့Aစည်း စုစုပေါင်း (၃၃-ဖွဲ့)၊ မြန်မာပြည်လတ်မြောက်ရေးAဖွ့ချုပ် နှင့်ွဲ (Global Action for Burma) တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် ကမ္ဘာ Aရပ်ရပ်ရှိ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသော နိင်ငံရေးAဖွ့Aစည်ဲးစုစုပေါင်း ၄၃-ဖွဲ့၊ Aားလုံးစုစုပေါင်း (၉၂-ဖွဲ့) တို့မှ ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ကြမည့် Aမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး လှုတ်ရှားမှုကြီး Aကောင်Aထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ရေး ကြေငြာချက်ကို ထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်း ဖြစ်သည်။ Aမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလှုတ်ရှားမှုကြီးတွင် လုပ်ငန်းစU်ကြီး (၇-ခု) ထားရှိလုပ်ဆောင်သွားမည်။ (၁) တစ်နိုင်ငံလုံး Aတိုင်းAတာနှင့် မြို့တိုင်း ၊ နယ်တိုင်းတွင် နAဖ စစ်Aုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားကို တွန်းလှန်ဖယ်ရှားရန် မိမိတို့ တူညီရာ မိတ်ဆွေ Aသိုင်းAဝိုင်း Aလိုက် Aဖွ့Aစည်းများ၊ သမဂ္ဂများ ပေါ်ပေါက်လားရေး၊ဲ(၂) ပြည်သူAားလုံး တိုင်းရင်းသားAားလုံးနှင့် ပေါ်ထွက်လာသည့် နိုင်ငံရေး ၊ တော်လှန်ရေး Aဖွဲ့Aစည်းများ AားလုံးAနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့Aားလုံးမှ နAဖ စစ်Aာဏာရှင် စနစ်ကြီးကို မိမိတို့ဖာသာ တွန်းလှန်ဖယ်ရှား နိုင်ရမည်ဟု ခိုင်မာသည့် ယုံကြည်မှု ရရှိသည်Aထိ တည်ဆောက်ရေး၊ (၃) ဖြစ်ပေါ်လာသည့် Aဖွ့Aစည်းAားလုံး နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်လိုသော လူပုဂ္ဂိုလ်Aားလုံးတို့ Aနေဖြင့် တူညီသည့် လုပ်ငန်းများ၊ဲလှုပ်ရှားမှု ကမ်ပိန်းများ ကို Aတူတကွ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် စုစည်းညီညွတ်စွာဖြင့် ခိုင်မာသည့် ပြည်တွင်းေAာင်နိုင် စွမ်Aား တည်ဆောက်ရေး နှင့်ေAာင်ပွဲရသည်ထိ ချီတက်လုပ်ဆောင်ရေး၊ (၄) နAဖ စစ်Aာဏာရှင် Aုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားAတွင်း Aလွှဲမရှောင်သာ Aလုပ်လုပ်ပေးနေကြရသည့် Aမျိုးကောင်းသား Aမျိုးကောင်းသမီး ပညာတတ်များ၊ စစ်တပ်တွင်းရှိ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် Aရာရှိ၊ Aရာခံ၊ Aကြပ် ၊ တပ်သားများ၊ လုံထိန်းများ၊ စွမ်းAားရှင်များ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးAသင်းဝင်များ၊ နAဖစစ်Aာဏာရှင် စနစ်ေAာက်မှ ကျွန်တော်တို့ Aားလုံးနှင့် Aတူတူ လွတ်မြောက်လိုစိတ် ရှိမည်ဟု ယူဆထားသည့် မရက နှင့် ရရက Aုပ်ချုပ်ရေး ဝန်ထမ်းများ၊ ဆယ်Aိမ်ခေါင်း ရာAိမ်ခေါင်း များပါ မကျန် Aမျိုသားလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီး တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာရေး၊ (၅) Aစပိုင်းတွင် မြို့တွင်းပျောက်ကျားသပိတ်တိုက်ပွဲများမှ တဆင့် နောက်ပိုင်းတွင် နAဖစစ်Aာဏာရှင်တို့၏ နိုင်ငံရေးAာဏာကို Aသက်ဆက်ပေးနေသည့် Aုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကြီးတစ်ခုလုံး လုံးဝ ပြိုကျသွားသည်ထိ AဆုံးAဖြတ်ပေးမည့်တိုက်ပွဲ (သို့) Aမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှု နိဂုံးချုပ်တိုက်ပွဲကို နAဖ တို့ ပြုလုပ်လိုသည့် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ Aကောင်Aထည် ဖော်ရေး၊ (၆) ပြည်သူလူထုကို Aမှန်တကယ် ကိုယ်စားပြုခေါင်းဆောင်နိုင်သည့် Aစိုးရတစ်ရပ်ပေါ်ထွက်လာရေး၊ (၇) Aသွင်ကူးပြောင်းကာလကိုေAာင်မြင်စာ ကူးပြောင်းနိုင်ရေး တို့ ဖြစ်ပါတယ်၊ွလုပ်ငန်းစU် ၁၊ ၂၊ ၃၊ နှင့် ၄ တို့Aား တပြိုင်တည်း Aရှိန်Aဟုန်ဖြင့် Aကောင်Aထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်သွားမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ Aဖွ့များAားလုံးAနေဖြင့် AမျိုးသားဒီမိုကရေစီAဖွဲ့ချုပ်မှ Aခိုင်Aမာတောင်းဆိုထားသည့် ဒေါ်ေAာင်ဆန်းစုကြည် နှင့် တကွဲနိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်AကျU်းသားAားလုံး ခြွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေး နှင့် ဖွဲ့စည်းAုပ်ချုပ်ပုံ AခြေခံUပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေး Aကြောင်းAရားများAားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိ Aပြည့်Aဝထောက်ခံသည်။
2. -၂- သို့သော်၊ နAဖတို့Aနေဖြင့် Aရှင်Uီးဂမ္ဘီရ၊ ဒေါ်ေAာင်ဆန်းစုကြည်၊ Uီးခွန်ထွန်းUီး၊ ကိုမင်းကိုနိုင် စသည့် ခေါင်းဆောင်များ၊ လူAခွင့် Aရေး လှုပ်ရှားသူAားလုံးကို ထောင်သွင်းAကျU်းချပြီး တိုင်ပြည်Aား တရားဝင် စစ်ကျွန်ပြုရေး လမ်းပြမြေပုံ (၇-ချက်)Aတိုင်း လုပ်ဆောင် နေကြရာ ကျွန်ုပ်တို့ Aဖွ့Aစည်းAားလုံးမှေAာက်တွင်ဖေါ်ပြထားသည့် AခြေခံAကြောင်းAရင်းများ၊ လတ်တလော AခြေAနေများ နှင့်ဲဆက်စပ်မှုတည်သည့် လုပ်ငန်းရည်ရယ်ချက် သုံးရပ်ကို ထားရှိလုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ွ(၁) နAဖစစ်ခေါင်းဆောင်များ နှင့် Aပေါင်းAပါ Aာဏာပိုင်များက တိုင်းပြည်နဲ့Aဝှမ်းတွင် ယနေ့Aထိ ဆက်လက်ဆက်တိုက် ကျူးလွန်နေသော မတရားမှုများ နှင့် ဒေါ်ေAာင်ဆန်းစုကြည်Aား မတရား ခုံရုံးတင်နေခြင်း Aားလုံးတို့Aတွက် တစ်တိုင်း တစ်ပြည်လုံးမှ Aရှိန်Aဟုန်ဖြင့် တုန့်ပြန်ရေး၊ (၂) နAဖတို့၏ လမ်းပြမြေပုံ(၇)ချက်Aား တန်ပြန်ကောင်တာလိုက်ပြီး စစ်Aာဏာရှင်စနစ်၏ စစ်Aုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားကြီး ပုံမှန်လည်ပတ်နေရာမှ လုံးဝရပ်ဆိုင်းပြိုကျသွားစေရန် လုပ်ဆောင်ရေး နှင့် (၃) ပြည်သူလူထု၊ တိုင်းရင်းသားAားလုံး နှင့် ပြန့်ကျဲနေသည့် နိုင်ငံရေးAင်Aားစုများ Aားလုံး Aမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး လှုတပ်ရှားမှု လမ်းကြောင်းကြီးAပေါ်တွင် တစ်စုတစည်းတည်း စုပေါင်း တော်လှန်နိုင်ရေး တို့ ဖြစ်သည်။ “ ဒီမိုကရေစီAရေးတော်ပုံေAာင်ရမည် ” The undersigned Burmese Democratic organizations (1) ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများAဖွဲ့ချုပ် (2) Aထက်ဗမာပြည် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (3) Overseas Burmese Patriots (OBP)
3. (4) All Burma Students League (ABSL) (5) Burma Political Prisoners’ Union (BPPU) (6) Arakan League for Democracy (Exile-Japan) ALD (Exile- Japan) アラカン民主連盟（亡命／日本） (7) Burma Democratic Action Group (BDA Group) ビルマ民主アクショングループ (8) Chin National Community (CNC) チン民族コミュニティー (9) Democratic Federation of Burma (DFB) ビルマ民主連合 (10) Federation of Workers Union of the Burmese Citizen in Japan (FWUBC) 在日ビルマ市民労働組合 (11) Kachin National Organization, Japan (KNO-JP) カチン民族機構
4. (12) － Kachin State National Congress Party for Democracy (Liberated Area－Japan Branch) KNCD (LA-JB) カチン州国民民主コングレス党（解放地区-日本支部 (13) Karen National League (KNL) カレン民族連盟(日本） (14) League for Democracy in Burma (LDB) ビルマ民主化同盟 (15) Naga National Society (NNS) ナガ民族社会 (16) National Democratic Front (Burma) (NDF-B), Representative for Japan 民族民主戦線（日本支部） (17) Palaung National Society (PNS) パラゥン民族社会 (18) Punnyagari Mon National Society (PMNS) ポンニャガリモン民族社会 (19) Shan Nationalities for Democracy (Japan) SND (Japan) 在日シャン民族民主主議会 (20) Shan State Nationalities for democracy (Japan) SSND (Japan)
5. シャン州民族民主化 (日本) (21) Confederation of National Youth for Burma (CNUB) (22) Burma Democratic Concern (BDC) (23) Union of Human Right Council (UHRC) (24) Danu National Council (25) Akha Public Army (APA) Aခါပြည်သူ့စစ် (26) Maingtha Youth Group(MYG) မိုင်းသာလူငယ်Aဖွဲ့ (27) Lahu Human Right Group (L.H.R.G) လားဟူလူ့Aခွင့်AရေးAဖွဲ့ (28) Kokant Human Right Group (K.H.R.G) ကိုးကန့်လူ့Aခွင့်AရေးAဖွဲ့
6. (29) Khamti Women Action Group(KWA) (30) (31) Kokant Youth Affairs Committee - KYAC ကိုးကန့်လူငယ်ရေးရာကော်မတီ (32) Maw Shan Public Army (M.S.P.A) မောရှမ်းပြည်သူ့စစ် (33) Khamti Public Army- KPA ခန္တီးပြည်သူ့စစ် (34) Kokant Women Action Group ကိုးကန့်Aမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုAဖွဲ့ (35) P.H.R.G (36) (37) Palaung Women Action Group ပလောင်Aမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုAဖွဲ့
7. (38) Danu Youth Affairs Committee (D.Y.A.C) ဓနုလူငယ်ရေးရာကော်မတီ (39) Akha Liberty Army (40) Danu Women Group ဓနုAမျိုးသမီးAဖွဲ့ (41) Akha Human Right Action Group Aခါလူ့Aခွင့်Aရေးလှုပ်ရှားမှုAဖွဲ့ (42) Akha Youth Affairs Committee A ခါလူငယ်ရေးရာကော်မတီ (43) Danu Public Army – D.P.A ဓနုပြည်သူ့စစ် (44) Maingtha Public Army (45) (46) Akha Women Action Group A ခါA မျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုA ဖွဲ့ (47) Palaung Youth Society - PYS ပလောင်လူငယ်A စည်းA ရုံး
8. (48) Pa- Pa-oh Human Right Action Group (49) Danu Youth Affairs Committee ဓနုလူငယ်ရေးရာကော်မတီ (50) (51) (52) Pa- Pa-oh Public Army (53) International Burmese Monks Organization (Canada Branch) (54) Society Lahu Youth Society - Thailand
9. (55) NLD(LA) CANADA (56) Burmese Students' Democratic Organization (57) Burmese Muslim Association (Canada) မြန်မာမူဆလင်Aစည်းAရုံး (ကနေဒါ) (58) Patriotism, Liberation, Dignity Patriotic Karen Association (59) ၈၈၈၈ သွေးသစ်ရဲဘော်များ( ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်င) သျွေား( ပည်ံ8888 New Blood Comrades (Union of Burma) (60) Karen Canadian Community (KCC)
10. (61) FREE BURMA FEDERATION(FBF) (62) Kuki Students Democratic Front (KSDF) (63) Democratic UDYL ( United Democratic Youth League ) Canada Branch ဒီမိုကရက်တစ်လူငယ် ညီညွတ်ရေး Aဖွဲ့ ချုပ် (64) Burmese Democratic group in Jamaica (65) 2009 Collective Action Committee (Burma) ၂ဝဝ၉ စုစည်းလှုပ်ရှားမူ ကော်မတီ(မြန်မာပြည်) ဝဝ၉ (66) Concerned Burmese Physicians and Professionals (67) Burma Watch International (BWI) (68)
11. (69) Aဝေးရောက်မွန်AမျိုးသမီးများAဖွဲ့ (70) LA) Mara People Party (LA) (71) (72) people volunteers association (73) Mandalay University Students Thetmaga မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ လးတက္က (74) Aktionsgruppe for Demokratii Burma(ADB-dk)
12. (75) Women on the Move for Burma (76) International Campaign for Burma (New York) (77) Forum of Burmese in Europe (78) Burmese National Movement in Florida (79) Canadian Campaign for Free Burma (80) Yadanabon University Student Thetmaga (ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ) (81) 81) Kyaukse University Student Thetmaga (ကျောက်ဆည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ) (82) 82) Meiktila University Student Thetmaga (မိတ္ထီလာကျောင်းသားသမဂ္ဂ) (83) Monywa University Student Thetmaga (မုံရွာကျောင်းသားသမဂ္ဂ) (84) Magway University Student Thetmaga (မကွေးကျောင်းသားသမဂ္ဂ) (85) Panglong University Student Thetmaga (ပင်လုံကျောင်းသားသမဂ္ဂ)
13. (86) Taunggyi University Student Thetmaga (တောင်ကြီးကျောင်းသားသမဂ္ဂ) (87) Myitkyina University Student Thetmaga (မြစ်ကြီးနားကျောင်းသားသမဂ္ဂ) (88) Kalay University Student Thetmaga (ကလေးကျောင်းသားသမဂ္ဂ) (89) Lashio University Student Thetmaga (လားရှိုးကျောင်းသားသမဂ္ဂ) (90) Shwe Bo College Student Thetmaga (ရွှေဘိုကျောင်းသားသမဂ္ဂ) (91) Myingyan College Student Thetmaga (မြင်းခြံကျောင်းသားသမဂ္ဂ) (92) Pakokku University Student Thetmaga (ပခုက္ကူကျောင်းသားသမဂ္ဂ) The spoken persons of undersigned Burmese Democratic Organizations 1. KO THAN SWE BDA PHONE: 090-4964-9718 Email: thanswe@gol.com 2. KO KYAW KYAW SOE LDB PHONE: 090-6031-4394 Email: sayarkway@yahoo.com 3. KO MAI KYAW OO NDF-J PHONE: 090-9831-7192 Email: maikyawoo@yahoo.com
14. 4. KO KO AUNG DFB/FBF PHONE: 090-1506-2893 Email: kokoaung_dfbjp@yahoo.com 5. KO HLA AYE MAUNG ALD PHONE: 090-2525-1966 Email: danya_thurein@yahoo.com 6. KO SHWE SIN HTUN FBF PHONE: 1-301-523-9292 Email: shwesinhtun88@gmail.com 7. KO SOE TUN Overseas Burmese Patriots PHONE: 9487 4413 Email: lunlunn@gmail.com or soetun_sg@yahoo.com 8. Ko Kyaw Than All Burma Students League (ABSL) PHONE: +91-9810601506 Email: dawnstar88@gmail.com 9. Ko Zaw Nyein Latt (Chairperson) BPPU (Burma Political Prisoner Union) PHONE: 0860024605 Email: pp_union@yahoo.com 10. Myo Thein Director Burma Democratic Concern (BDC) PHONE: +44 208 493 9137 +44 787 788 2386 Email: myothein19@gmail.com myothein@bdcburma.org 11. Khin Maung Win Burma Democratic Concern (BDC) [United States] PHONE: 00 194196126 22 Email: kmwin05@gmail.com 12. KO PYOEZIN The Best Manure Email: pyoezin@gmail.com 13. KO KYAW KYAW The Best Manure Email: tbmmanure@gmail.com 14. KO SAI MYO WIN UHRC PHONE: 0835823490 Email: uhrc.ad@gmail.com
15. 15. DR. SAI SIN SAI Danu National Council (DNC) Email: dnc.ad1@gmail.com 16. NAN THIDAR AYE Danu Women Group PHONE: 0827581156 Email: ntda.dwg@gmail.com 17. Maj.SAI SHEAN Akha Liberty Army (A.L.A) Email: majss.ala@gmail.com 18. KHUN THAN MYINT Maingtha Public Army Email: ktm.mparmy@gmail.com 19. SAI BO NI Lahu Public Army Email: saibn.lpa@gmail.com 20. SAI LON TIT Pa-oh Public Army Email: Sailt.ppa@gmail.com 21. U AR YAR Pa-oh Youth Society Email: aryar.pys@gmail.com 22. NAN NEW YIN SOE Palaung Women Action Group (PWAG) Email: nws.pwag@gmail.com 23. KO AIK NAUNG Kokant Human Right Group (K.H.R.G) Email: kan_khrg@yahoo.com 24. NAN AYE NEW Kokant Women Action Group (K.W.A.G) Email: nan.kwag@gmail.com 25. KO WIN MYAT Kokant Youth Affairs Committee – KYAC Email: kwm.kyac@gmail.com 26. MAJ.KYAWT LON Maw Shan Public Army Email: majkl.ad@gmail.com 27. SAI TUN OO Maw Shan Youth Society (MSYS) Email: sto.msys@gmail.com 28. KO SAI MYINT NAING Intha Youth Affairs Committee (IYAC)
16. Email: smn.iyac@gmail.com 29. MA MOE THU Khamti Women Action Group – K.W.A.G Email: mmt.kwag@ymail.com 30. KO THAUNG HTIKE Khamti Youth Affairs Committee ( KYAC) Email: thaunghtike.ad@gmail.com 32. 8888 New Blood Comrades (Union of Burma) PHONE: 01. 301-300-3167 Email: union_burma8888@yahoo.com 33. MAUNG MAUNG OO Burmese Students' Democratic Organization PHONE: 416 605 8765 Email: sanchaunggwin@yahoo.com 34. ASHIN KAWWIDA Chairman IBMO (Canada) PHONE: 1 416 747 7879 35. U AUNG TIN NLD(LA) Canada PHONE: 647 343 7871 Email: uaungtin@yahoo.com 36. KO WIN MAUNG Burmese Muslim Association (Canada) PHONE: 647 343 2837 Email: wmaung4@yahoo.com 37. MAHN KYAW SWE Karen Canadian Community (KCC) PHONE: 519 434 0139 Email: burmaforum2000@yahoo.ca 38. KO MAW GYI Patriotic Karen Association 1570 Conway Street Saint Paul MN -55106 U.S.A PHONE: (651)207-8893 Email: kanyawpoeoffice@gmail.com pkaoffice@yahoo.com sawmorrison@yahoo.com 39. KO LULUN Kuki Students Democratic Front (KSDF) Head Office: Moreh, Manipur, India Delhi Office: WZ-87A, Budella Market, Vikaspuri, New Delhi-110018 PHONE: 91-9899278511
17. 40. KO SOE MOE UDYL ( United Democratic Youth League ) Canada Branch PHONE: 4167354128 Email: CanadaMyanmar@gmail.com 41. Dr. SOE NAUNG Burmese Democratic group in Jamaica EmaiL: soehtwe2028@gmail.com 42. DR. KO KO LAY (UK) Concerned Burmese Physicians and Professionals Home : 44 1924 440 275 Mobile: 44 7828 079 108 Email: drkokolay@yahoo.co.uk 43. DR. ZAW MYINT (USA) Concerned Burmese Physicians and Professionals PHONE: 215-632-9040 extension 652 Email: zmyint51@hotmail.com 44. KO HTET AUNG 2009 Collective Action Committee (Burma) PHONE: 08-7524-7034 Email: cacburma@gmail.com 45. NAI OAU SAR General Secretary Mon National Democratic Front (Liberated Area) PHONE: 0850527306 Email: naioausar@gmail.com 46. DR.ALICE KHIN SAW WIN President Burma Watch International(BWI) PHONE:(780) 439-7555 47. MI PAKAW MU Secretary of OMWO Overseas MonWomen's Organization (OMWO) PHONE: 0872047591 Email: pakaomu@gmail.com 48. KO AUNG SAN OO Leader Mandalay University Students Thetmaga(MUST) Email: must.upper@yahoo.com 49. Salai Chinzah Chairman Mara People Party LA PHONE: 9862066398. 50. KO THEIN SAN Chairman people volunteers association PHONE: 08-7695-3100
18. Email: pvassociatoon@gmail.com 51. KO KYAW KYAW General Secretary (2) people volunteers association PHONE:08-7571-6209 Email: pvassociatoon@gmail.com 52. KO ARKAR SOE Freedom Movement in Burma PHONE: 301-213-0605 www.adpfmburma.com Email: arkarsoee@yahoo.com 53. KO TAYZAR TAY Aktionsgruppe for Demokratii Burma(ADB-dk) Email: tayzar.tay@gmail.com 54. Ko Thant Zin Myint (USA) International Campaign for Burma (New York) Phone: 347-229-4309 Email: icbnewyork@gmail.com 55. Ko Myo (USA) International Campaign for Burma (New York) Phone: 347-668-5046 E-mail: komyoe_art@yahoo.com 56. Khin Sandi Tint (USA) Women on the Move for Burma Phone: 917 445 9222 E-mail: freeassk@yahoo.com 57. Sonny AungThanOo (Coordinator) Forum of Burmese in Europe Phone: +49 221 9522450 E-mail: AtoBurma@web.de 58. Dr. Pe Than Maung Burma National Movement in Florida E-mail: pethanmaung@yahoo.com 59. Zaw W. Kyaw Canadian Campaign for Free Burma Phone: +1-416-358-2318 E-mail: zaw.w.kyaw@gmail.com 60. Ko Myo Kyaw Lwin General Secretary Upper Burma Students Thetmaga E-mail: ubst.burma@gmail.com
19. 61. Ko Than Naing Yadanabon University Student Thetmaga E-mail: tn.yust@gmail.com 62. Ko Zaw Lin Maung Kyaukse University Student Thetmaga E-mail: zlm.kst@gmail.com 63. Ko Aung Aung Meiktila University Student Thetmaga E-mail: aung.mst@gmail.com 64. Ko Than Htun Monywa University Student Thetmaga E-mail: th.myst@gmail.com 65. Ko Kyaw Moe Magway University Student Thetmaga E-mail: km.mgst@gmail.com 66. Sai Tin Shwe Panglong University Student Thetmaga E-mail: sts.plst@gmail.com 67. Sai Lone Shan(စိုင်းလုံးရှန)ဲ် Taunggyi University Student Thetmaga E-mail: sls.tgst@gmail.com 68. Ko Kyaw Soe Myitkyina University Student Thetmaga E-mail: ks.mknst@gmail.com 69. Ko Ko Naing Kalay University Student Thetmaga E-mail: kkn.klst@gmail.com 70. Ko Kyaw Zaw Lin Lashio University Student Thetmaga E-mail: kzl.lsst@gmail.com 71. Ko Zwe Ko Shwe Bo College Student Thetmaga E-mail: zk.sbst@yahoo.com 72. Ko Ko Gyi Myingyan College Student Thetmaga E-mail: kkg.mcst@ymail.com 73. Ko Zaw Lin Pakokku University Student Thetmaga E-mail: zl.pkst@ymail.com
Irshad CV (2)
SHOAIB C.V. 1
zubair mohammed kunil
Zeyad K.Alnajjar C.V